ပေါက်ကွဲမှုဆန့်ကျင်ဖိုက်ဘာ Optic တယ်လီဖုန်းအသံစွမ်းအား Vandal အထောက်အထားတယ်လီဖုန်း - JWBT830, တရုတ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးဖိုင်ဘာ Optic တယ်လီဖုန်းအသံစွမ်းအား Vandal အထောက်အထားဖုန်း - JWBT830 ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ - Ningbo Joiwo ပေါက်ကွဲမှုကာကွယ်နိုင်သောနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
သင်ဒီမှာပါ : မူလစာမျက်နှာ>ကုန်ပစ္စည်း>ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားတယ်လီဖုန်း>ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထား Fiber Optic တယ်လီဖုန်း
ပေါက်ကွဲမှုဆန့်ကျင်ဖိုက်ဘာ Optic တယ်လီဖုန်းအသံစွမ်းအားဖြင့် Vandal အထောက်အထားတယ်လီဖုန်း - JWBT830
အရောင်： အဝါရောင် (စိတ်ကြိုက်)
အရွယ်အစား 343 294 × 206 × XNUMX
ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း： Fiber Optica
၁။ Ethernet၊ Cross-network segment နှင့် cross-route သို့တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်ခြင်း။
၂။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခလုတ်ဖြင့်ခေါ်ဆိုခြင်း၊ မည်သည့် terminal ကိုမဆို full-duplex intercom (ပုံမှန်) ကိုနားလည်ရန်ခေါ်ပါ။
4. ဖုန်း၏အမှု၏မူပိုင်ခွင့်ဒီဇိုင်းသည်ရေစိုခံ၊ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်ပြီးရေစိုခံအဖုံးမလိုအပ်ဘဲလှပပြီးလက်တွေ့ကျသည်။
၅။ တယ်လီဖုန်းအတွင်းရှိ circuit သည်တိကျသောနံပါတ်ရှိပြီးရှင်းလင်းသော၊ တည်ငြိမ်သောအလုပ်နှင့်အခြားအားသာချက်များကိုခေါ်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘက်လိုက်မှုရှိသောပေါင်းစပ်ထားသော circuit ကိုမွေးစားသည်။
၆။ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းသေဆုံးသောအိုး၊ သံမဏိကီးဘုတ်၊ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော PC receiver၊ zinc alloy fork ။
7. 30W *4အရည်အသွေးမြင့်အသံချဲ့စက်၊ သတိပေးမီးများ၊ ကြည်လင်သောအသံနှင့်တောက်ပသော။
၉။ သင်သည် hotline နံပါတ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးအလိုအလျောက်ခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။
12. အခွံ၏မျက်နှာပြင်သည်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် electrostatically spray ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ ကောင်းသော antistatic စွမ်းရည်နှင့်ချေးခြင်းတို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၁၃။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲချိတ်များနှင့်ကီးဘုတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သည်။ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ ရောင်းချပြီးနောက်တုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်းသည်မြန်ဆန်သည်။
ExdibIICT6Gb / EXtDA21IP66T80 ℃
၁ -၃ / ၄”
လက်မှတ်: SGS, ISO 9001:2000 , CE, FCC,ROHS,CNEX, IP65/IP66/IP67,
ထုပ်ပိုး: 1sets/carton, 12kg/carton
Supply နိုင်ခြင်း: 5000 sets/month
ငွေပေးချေမှုကာလ T/T, Paypal, Alibaba Trade Assurance, L/C or others for negotiation.
ကမ်းလှမ်းချက်နမူနာ - Samples are available and can be free for strategic customer.
နမူနာအစီအစဉ် - Standard samples will be prepared to sending in about3working days.
ရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု2Years' Warranty and spare parts are available for maintenance.
ပေါက်ကွဲမှုသက်သေအထောက်အထားရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များအတွက်အပြင်ဘက်နံရံတွင် Mount Fiber Optic တယ်လီဖုန်း -JWBT832
ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထား Fiber Optic တယ်လီဖုန်းတိုးချဲ့ခြင်းသတ္တုတွင်းတယ်လီဖုန်း - JWBT831